Orig सक्कली ब्यापार विचारहरू यस बर्षमा सुरु गर्न - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B6B बजार समाचार
यस वर्ष सुरू गर्न Orig मूल व्यवसायिक विचारहरू
सम्पादकको पिक अप्रिल 17, 2021 अप्रिल 14, 2021 स्टेला राइन अरबी फ्रीलान्स, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, बिक्रीको लागि Gigs, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, साइड Gigs, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग
खाना वितरण सेवाहरू लोकप्रिय हुँदैछन् र तपाईंको पैसा र ऊर्जा लगानी गर्न एक उत्तम ठाउँ हुन सक्छ।
हामी अनलाइन शपिंगको युगमा बाँचिरहेका छौं, र तपाईं यस तथ्यलाई एक आकर्षक व्यापार उद्यममा बदल्न सक्नुहुन्छ।
अरू मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् जो उनीहरूको बिरूवाहरू स्वस्थ राख्नको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् र तपाईंले पैसा बनाउँदा केही पूरा गर्दै हुनुहुन्छ।
२०२१ तपाईलाई आफ्नै मालिक बन्ने बर्ष हुन सक्छ। हाल, त्यहाँ सकियो 30 लाख साना व्यवसायहरू केवल संयुक्त राज्य अमेरिका मा दर्ता, र अधिक र अधिक व्यक्ति आफ्नो विचार लाई जीवन दिन र एक जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छन् जसले उनीहरूलाई मनपर्दछ। यदि तपाईं पनि उद्यमितामा हात प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ तर तपाईंको व्यवसाय उद्यमको लागि केही प्रेरणा चाहिन्छ भने यहाँ केहि विकल्पहरू छन्।
जब यो क्याफेको बारेमा छ, तपाईको कल्पना मात्र सीमित छ।
खाना वितरण सेवा सुरू गर्नुहोस्
के तपाई राम्रो कुक हुनुहुन्छ? त्यसोभए, तपाईं आफ्नो प्रतिभालाई जागिरमा परिवर्तन गर्न र खाद्य-सम्बन्धित व्यवसाय सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। आज, स्वस्थ खाना मानिसहरूको बढ्दो चिन्ताको विषय हो, तर दैनिक हडबडमा, तिनीहरूमध्ये थोरैले आफैंमा सन्तुलित खाना तयार गर्न समय पाउँदछन्। यसैले खाना वितरण सेवाहरू लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन् र तपाईंको पैसा र ऊर्जा लगानी गर्नको लागि उत्तम स्थान हुन सक्छन्। सदस्यता आधारित सेवा सुरू गर्नुहोस् र तपाईसँग स्थिर आय हुनेछ जबकि व्यस्त व्यक्ति स्वस्थ रहनेछन् तपाईको खाना पकाउँदा।
एउटा मोडलाई मोडेको साथ क्याफे खोल्नुहोस्
क्याफेहरू सधैं व्यक्तिको मनपर्ने ह्याoutआउट स्थानहरू हुन जान्छन्, चाहे त्यो व्यवसायको लागि होस् वा आकस्मिक बैठकहरूको लागि। यद्यपि, नयाँ क्याफे खोल्ने जोखिमविना नै हो। व्यक्तिहरू सम्भवतः शहरमा उनीहरूको मनपर्ने ठाउँहरू छन्, त्यसैले उनीहरूको ध्यान खिच्नको लागि तपाईंले थप मेहनत गर्नुपर्दछ। धन्यबाद, जब यो क्याफेको बारेमा छ, तपाईंको सीमा केवल तपाईंको कल्पना हो। थेम्ड क्याफेहरू भविष्यका हुन् र तपाई साँच्चिकै रमाईलो र रमाईलो अवधारणाको साथ आउन सक्नुहुन्छ। बोर्ड खेल क्याफेहरू र शिल्प क्याफेहरू मात्र हुन् केहि विकल्पहरू। के को लागि मांग को लागी हेर्नुहोस् र आफ्नो आला दर्शकहरु को लागी।
अनलाइन स्टोर खोल्ने बारेमा सोच्नुहोस्
हामी अनलाइन शपिंगको युगमा बाँचिरहेका छौं, र तपाईं यस तथ्यलाई एक आकर्षक व्यापार उद्यममा बदल्न सक्नुहुन्छ। हस्तनिर्मित चीजहरू मार्फत कपडाहरूदेखि पुरानो खेलौनासम्म, तपाईं कुनै पनि चीज बेच्न सक्नुहुनेछ र संभावना यो हो कि यसलाई खरीद गर्न इच्छुक मानिसहरू त्यहाँ छन्। यद्यपि ई-वाणिज्य व्यवसाय सुरू गर्नु त्यति सजिलो छैन जति तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो स्टोर कहाँ होस्ट गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक छ, कसरी तपाईं आफ्ना अर्डरहरू पूरा गर्नुहुन्छ, र कसरी तपाईं मानिसहरूलाई तपाईंको व्यवसायको बारेमा जान्न दिनुहुन्छ। यो एकदम कडा श्रममूलक व्यवसाय हो कती सामान्य देखिन्छ।
तपाईंको हरियो थम्बको प्रयोग गर्नुहोस्
के तपाईंको शौक बागवानी गर्दै छ र तपाईंको हेरचाहमा बोटबिरुवा फस्टाउँदैछन्? तपाईं यसलाई आफ्नो लाभमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र थुप्रै बोटसँग सम्बन्धित व्यवसाय विकल्पहरू मध्ये एउटा सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग पहिले नै बगैचा छ भने, सानो बोट नर्सरी शुरू गर्नु जुन पछि ठूलो प्रयासमा बढ्न सक्छ ती मध्ये एक हो। यदि तपाईं फलफूल र तरकारीहरू सक्रियतापूर्वक बढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको अतिरिक्त उत्पादन बेच्न दिमागमा नलाग्ने हुन्छ। तर विचारहरूको सूची यहाँ रोकिदैन। यदि तपाईंसँग बिरूवाहरूको बारेमा विस्तृत ज्ञान छ भने, एक बोट परामर्शदाता हुनु पनि एक राम्रो विचार हुन सक्छ। अरू मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् जो उनीहरूको बिरूवाहरू स्वस्थ राख्नको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् र तपाईंले पैसा बनाउँदा केही पूरा गर्दै हुनुहुन्छ।
व्यक्तिहरू तिनीहरूका घरपालुवा जनावरहरूको कदर गर्दछन् र तिनीहरूलाई परिवारका सदस्यहरू जस्तो व्यवहार गर्छन्।
रचनात्मक पाल्तु व्यवसाय विचारहरू विचार गर्नुहोस्
व्यक्तिहरू उनीहरूका घरपालुवा जनावरहरूको कदर गर्दछन् र उनीहरूलाई परिवारका सदस्यहरू जस्तो व्यवहार गर्छन्, त्यसैले उनीहरू आश्चर्यका रूपमा आउदैनन् कि तिनीहरू उनीहरूका लागि कपडा, सामान र स्वादिष्ट स्नैक्समा खर्च गर्न तयार छन्। हो, तपाईं एक घरपालुवा जनावर पसल खोल्न सक्नुहुन्छ वा एउटा कोमल सेवा शुरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर वास्तवमा आज यस उद्योगमा यति धेरै चीजहरू छन्। कुकुर फूड ट्रक अपरेटिंगबाट सबै प्रकारका मानिसका घरपालुवा जनावरहरूको मनमोहक मेमेन्टोहरू निर्माण गर्न, त्यहाँ धेरै रचनात्मक छन् घरपालुवा जनावरको बिचारहरु तपाईं जनावरहरूसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ। घरपालुवा जनावरहरूसँग तपाईंको प्रतिभालाई जोड्नुहोस् र घरपालुवा फोटो फोटोग्राफी व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्, पाल्तु जनावरहरूको चित्र पेन्ट गर्नुहोस् वा फेसनल पपीहरूका लागि कस्टम कपडा सिउन। तपाईले जसलाई छनौट गर्नुभयो, पाल्तु जनावर मालिकहरूले मन पराउनेछन्।
एक झलक व्यवसाय शुरू गर्नुहोस्
के तपाइँसँग केहि थप जग्गा छ जुन तपाइँ तपाइँको व्यापार प्रयासको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई एक झलक साइटमा परिवर्तन गर्ने बारेमा सोच्नुहोस्! २१ औं शताब्दीमा, मानिसहरू प्रकृतिमा फर्कन उत्सुक छन् र आफ्ना ईमेलहरू र सूचनाहरूबाट केही समय खर्च गर्दछन्। जे होस्, तिनीहरू अझै आरामको लागि खोजिरहेका छन् जब उनीहरू आराम गर्दै छन्। Glamping दुबै संसारको सबै भन्दा राम्रो सँगै ल्याउँछ र एक सम्पन्न ग्राहक आधार आकर्षित गर्न सक्दछ यदि तपाईं यो सही कार्यान्वयन गर्नुभयो। यसमा संलग्न लगानी स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुँदै गइरहेको छ - तपाईले सबै गियर प्राप्त गर्नु पर्छ र त्यसमा सस्तो पनि छैन – यद्यपि यो यस्तो व्यवसाय हो जुन आउँदो बर्षसम्म दिइरहन्छ र आयको निष्क्रिय स्रोत पनि बन्न सक्छ।
थोरै रचनात्मकताको साथ, तपाईं एक व्यापार विचारको साथ आउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको स्थानीय दर्शकहरूको चासो जगाउँदछ र तिनीहरूलाई केही समय मा जित्नेछ। तपाईलाई के मनपर्दछ, केमा राम्रो हुनुहुन्छ र त्यहाँ केको माग छ सोच्नुहोस्, र तपाईले आफ्नो खोजलाई ठूलो सम्झौतामा संकुचित गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यापार Business Ideas सांप्रदायिक समाचार
स्टेला रायन एक कला इतिहासकार, लेखक, सचेत उपभोक्ता र गर्व आमा हुन्। जब उनी आफू वरपरका चीजहरू सुधार गर्न कोशिस गर्दै थिइनन् (र उनी आफैलाई त्यो चीजको लागि), उनी आफूलाई राम्रो पुस्तकमा गुमाउन मन पराउँछिन्।
Safe सुरक्षित अभ्यास गर्भवती हुँदा गर्न